यू-२३ खेलमा आज नेपाल–कतार भिड्दै
नेपाली राष्ट्रिय यू-२३ फुटबल टोलीले एएफसी यु-२३ च्याम्पियनसिप छनोट अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेल आज कतारसंग खेल्दै छ । कतारको दोहास्थित स्पोर्टस सिटी सेन्टरको मैदानमा हुने उक्त खेल नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजे हुनेछ । नेपाल सशक्त मानिएको टोली कतारलाई रोक्ने योजनासहित मैदानमा उत्रनेछ । कतार एशिया कपको विजेता टोली पनि हो ।
१० नम्बर नपाएपछि हाजार्डले कुन नम्बरको जर्सी रोजे ?
छोराले विश्वकप जिते तर यही कारण पिताले गाली खाइरहेछन्, छोराको हार चाहन्थे पिता
के न्यूजिल्याण्डले सुपरओभरअघि नै १ रनले जितेको थियो ? अम्पायरको गल्तीले हारेको हो ?
१२औं विश्वकपको उपाधि इङ्ल्यान्डलाई
विश्वकपमा हारपछि विराट कोहली कप्तानबाट आउट ! को बन्ला नयाँ कप्तान ?
विश्वकप फाइनल खेलमा जब महिलाले कपडा खोलेर मैदान छिरेपछि...